The Ab Presents Nepal » ॐ लेख्दै वि.सं २०७६ भदौ ८ गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस सम्पुर्ण मनोकामना पुर्ण हुनेछ !
ॐ लेख्दै वि.सं २०७६ भदौ ८ गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस सम्पुर्ण मनोकामना पुर्ण हुनेछ !
प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन्, ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर काम गर्नु पर्नेछ , वादविवादमा अघि नसर्नुहोला। अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। फजुल खर्च बढ्नेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ
अरूको भर पर्नाले आफ्नो काम अधुरो हुनेछ। आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। हतारमा निर्णय लिँदा काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। दिगो काम सुरु गर्ने समय छ। धेरै बोल्दा समस्या आउन सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीले उत्साह जगाउनेछन्। खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउनेछ। यात्राको सम्भावना छ। आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ।
रोकिएको काम बन्नेछ। आलस्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ। प्रयत्न गर्दा व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। आम्दानी बढ्नेछ। व्यभैपरी आउने समस्याले खर्च बढ्नेछ भने ।
पुरानो समस्या सुल्झानाले विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। आयआर्जनका नयाँ स्रोतसमेत फेला पर्नेछन्।
समाजमा विवादास्पद काम गर्नुपर्दा समस्यामा परिनेछ। अरूका काममा धेरै समय व्यतीत गर्नुपर्नेछ। चुनौतीहरू पन्छाउँदै चिताएको काम बनाउन सकिनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् भने मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ।
समयमा काम सम्पादन गर्न नसकिए पनि दिगो योजना बनाउन सकिनेछ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने बुद्धिले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। अस्वस्थताले काममा बाधा पुग्न सक्छ। खर्च र चुनौतीको समय रहेको हुँदा अलि सजग रहनुपर्ला। श्रम परे पनि लगनशीलताले केही उपलब्धि दिलाउन सक्छ।
स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनुहोला। समयमा सजग नहुँदा कर्मफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्आफन्तजनसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि सजग रहनुहोला। लोकाचारका लागि फजुल खर्च बढ्न सक्छ। । केही अवसर देखिए पनि मनोरञ्जनमा अलमलिँदा काम रोकिनेछ।
रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। व्यक्तित्वमा पनि निखारता आउनेछ। तापनि स्रोतसाधन जुट्नाले काम बन्नेछ। लगानी बढाउनुपरे पनि नयाँ व्यवसाय थालनी हुनेछ। बलभन्दा बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धी बढ्नाले समस्या थपिएलान्।
केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्नुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। वैधानिक प्रावधानले पनि समस्या निम्त्याउनेछ।कामको मेसो नमिल्दा केही अलमल हुनेछ। समयमा गम्भीर नबन्दा पनि दुस्ख पाइनेछ।
शुभचिन्तकहरू समेत टाढा हुने समय छ। सेवामूलक काम बीचैमा रोकिन सक्छ। धेरै लाभ नभए पनि केही समस्या सुल्झाउन सकिनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ।सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्।
एक्लोपना अनुभूति हुनेछ। व्यसायमा कीहि काम बिग्रनाले केही दौडधुप गर्नुपर्ने देखिन्छ। लेनदेन सम्बन्धी हिसाबमा होसियार रहनुहोला। अग्रजहरूको सहयोगले केही काम गर्न सकिनेछ। तर गोपनीयता बाहिरिनाले काममा समस्या पर्न सक्छ।